Transparency Myanmar: Oct 5, 2009
တရားမဝင်ဖြတ်ကျော်သူ ထိုင်းများအား ပစ်မိန့်ကို ဟွန်...
အထီးကျန် ဧကစာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကျင့်သုံးရမည့် နည်...
ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ် ဘီလ်ကလင်တန်၏ ဟေတီခရီးစဉ်
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘေးဖယ်...
စစ်အစိုးရ၏ မဟာမိတ်နိုင်ငံများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အာ...
ရဲချုပ်ခင်ရီ အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိ အရေးယူခံထားရဖွယ်...
မြန်မာ့အရေးအဖြေရှာမှုတွင် ထိုင်းနိုင်ငံက ပူးပေါင်းပ...
ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ဒေါ်လာ ၃ ထရီလျံမြုပ်နှံမည်
ယူနန်အသင်းဖြစ်သွားသော ဒဲလ်တာ ယူနိုက်တက်
ကွန်မြူနစ်တရုတ်ပြည်၏ နှစ်၆၀ပြည့် အခမ်းအနား
နျူကလီးယားဆောင်ရွက်ချက်များ ငြိမ်း ချမ်းရေးကို ဦး...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ လွပ်လပ်ပြီးတရား မျှတမှုရှိမည်ဟု စ...
မြန်မာအစိုးရ ဝန်ကြီးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆ...
မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက လွပ်လပ်၍ တရားမျှတသော ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာ GSM များသုံးနိုင်မည်...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နျူကလီယာအရေးနှင့် အမေရိကန်မူဝါဒ
ကမ္ဘောဒီးယားတွင် အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့် များကန့်သတ်ပိတ်...
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ခပ်ကြမ်းကြမ်း ကိုင်တွယ်ရန် ကုလသမဂ...
တိုင်ဖုန်း Parma ကိုဆုတောင်းရင်းစောင့်စားနေသော ဖိလ...
တရားမဝင်ဖြတ်ကျော်သူ ထိုင်းများအား ပစ်မိန့်ကို ဟွန်ဆန်က စစ်တပ်သို့ပေး
တရားမဝင်ဖြတ်ကျော်သူ ထိုင်းများအား ဟွန်ဆန်ပစ်မိန့် ပေး
ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန် (Hun Sen) သည် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် အငြင်းပွားမှုဖြစ်နေသော နယ်ခြားဒေသအတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာသည့် ထိုင်းလူမျိုးများအား ပစ်မိန့်ကို ၎င်း၏တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ပေးထားကြောင်း တနင်္လာနေ့က ပြောကြားသည်။ ထိုင်းတို့၏ နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု တောင်းဆိုခြင်းကို ဒေါသကြီးစွာဖြင့် တုန့်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုင်းဆန္ဒပြသူများက (၁၁) ရာစု ပရီဗီဟာ (Preah Viheur) ဘုရားကျောင်းအနီးရှိ အငြင်းပွားနယ်မြေတွင် ဆန္ဒပြပြီး နောက်တစ်ပတ်တွင် ယခုကဲ့သို့ ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဒေသအတွင်း လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က စတင်ခဲ့သည့် မပြေမလည်ဖြစ်မှုကြောင့် စစ်သား (၇) ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
“သူတို့တပ် ဝင်လာလျှင် ပစ်ပါ”ဟု၎င်းအား သြဘာပေးနေသော အာဏာပိုင်များရှေ့တွင် လူသိရှင်ကြား ပြောကြားခဲ့သည်။ အရပ်သားဖြစ်စေ၊ စစ်တပ်ဖြစ်စေ၊ ကျူးကျော်သူရန်သူများကို တရားမဝင် ဝင်ရောက်ပါက ပစ်ရန် ပစ်မိန့်ပေးခဲ့သည်။
စစ်တပ်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံး အမိန့်ကို နာခံရမည်။ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူများကို အကာအရံများဖြင့် ကာကွယ်မည်မဟုတ်ဘဲ ကျည်ဆန်ဖြင့် ကာကွယ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘောဒီးယား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ဝန်ကြီးဌာနရုံးသစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသွားသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှ တောင်းဆိုထားသော Preah Vihear အနီးရှိ ၄.၆ စတုရန်းကီလိုမီတာရှိသည့် နယ်မြေကိစ္စကို ရှေ့လ အာဆီယံအစည်းအဝေးတွင် တင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုကို တစ်ဘက်အမြင်ဖြင့် တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အကယ်၍ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကသာ တစ်ဖက်သက်ရေးဆွဲထားသော မြေပုံ ကျွန်ုပ်ရှေ့တွင် ရှိလျှင် ဆုတ်ဆွဲပစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် စစ်ကို မလိုလားကြောင်း၊ သို့သော် မိမိပိုင်နက်အတွင်း ဝင်ရောက်နေသော ရန်သူများအား နှိမ်နင်းခွင့်ရှိကြောင်း ပြောကြားသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြင်းထန်သော တုန့်ပြန်မှုများ ပြုလုပ်လာပါက ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီသို့ အဆိုပါကိစ္စကို တင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့၏ အဆိုပါဒေသအတွင်း အငြင်းပွားမှုမှာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း လွန်ခဲ့သည့် ဇူလိုင်လက ဘုရားကျောင်းကို ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် အမည်စာရင်းဝင်အဖြစ် ကြေညာပြီးနောက် မငြိမ်မသက်မှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားလာရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့တရားရုံးမှ ၁၉၆၂ တွင် အဆိုပါဒေသကို ကမ္ဘောဒီးယားက ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း အဆိုပါရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်း၏ အဝင်ကျောက်ဆစ်လှေကားနှင့် လက်ရာမြောက်ကျောက်ဆစ်နှင့် ပန်းပုတို့သည် ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် ထိုင်းစစ်သားများက အဆိုပါဒေသတွင် ကင်းလှည့်မှုများပြုလုပ်နေကြပြီး လွန်ခဲ့သည့် ဧပြီလတွင် အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် လူ ၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ရသည်။ အဆိုပါဒေသရှိ နယ်ခြားစည်းမျဉ်းကို သတ်မှတ်ထားခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ဘဲ ယင်းနယ်မြေအတွင်း ကမ္ဘောဒီးယားစစ်ပွဲ အတွင်းက မြေမြှုပ်မိုင်းများသာ ကျန်ရှိနေပါသည်။
အထီးကျန် ဧကစာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကျင့်သုံးရမည့် နည်းဗျူဟာများကို အမေရိကန် ကြိုးစားရှာဖွေနေ
US struggling to findastrategy on reclusive Myanmar
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် မြန်မာအစိုးရအပေါ် ထားရှိသည့် နည်းဗျူဟာသစ်ဖြစ်သော စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အစဦး အားပေးတိုက်တွန်းမှုများကို ဆောင်ရွက်နုိင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် အစွန်းရောက် ဧကစာကျင့်သုံးနေသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအား မည်ကဲ့သို့ လွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်မည်နည်း ဟူသော ဆွေးနွေးငြင်းခုန်ဖွယ်ရာ ပြဿနာတစ်ရပ် အစပျိုးနေပြီဖြစ်ပါသည်။
အင်္ဂါနေ့က အမေရိကန်အစိုးရ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များသည် မြန်မာ့တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်အချို့နှင့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ထိပ်တန်းအဆင့် တွေ့ဆုံမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှု အသစ်ပြုလုပ်ရန် ကတိပေးခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးရေး အပါအဝင် ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်ရန် တောင်းဆိုထားသည်။
သောကြာနေ့ကမူ မြန်မာတရားရုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အယူခံလွှာကို ပယ်ချ၍ နေအိမ်တွင် အကျယ်ချုပ် ဆက်လက်ချထားခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အစိုးရသည် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့သော ပါတီ၏ခေါင်းဆောင် ဖြစ်မည့်သူမနှင့် ရှားရှားပါးပါး တွေ့ဆုံမှုကိုမူ ပြုလုပ်ခဲ့ပေသည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု မူဝါဒဖြင့် ကမ္ဘာကျော်သွားခဲ့သော သမ္မတ အိုဘားမား အစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအား လအတန်ကြာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကို ဦးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယခုအချိန်အထိ ပန်းပန်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကန်အစိုးရက အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများကို ရုတ်တရက် ဖြေလျှော့ပေးဦးမည် မဟုတ်ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထောက်ခံသူ အုပ်စုများ စိတ်သက်သာရာ ရနေချိန်တွင် သြဂုတ်လက မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သူ ဆီနိတ်တာ ဂျင်မ်ဝက် ဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေး အုပ်စုက အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအသစ်ကို ကြိုဆိုလိုက်သည်။ ရှေ့ဆက်၍လည်း ပိတ်ဆို့မှုများသည် သဘောထားကွဲလွဲမှု၏ အကြောင်းအချက် ဖြစ်နေပါဦးမည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထောက်ခံသူ US Campaign for Burma က တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့် လက်နက်ကုန်သွယ်မှု မပြုလုပ်ရန် ဖိအားပေးရေး အစရှိသော အချို့အရေးယူမှုများကို ကျယ်ပြန့်စွာ ဆောင်ရွက်သွားရန် အမေရိကန်အစိုးရအား တိုက်တွန်းထားသည်။
တင်းကြပ်ပြင်းထန်သော အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများကို ရုတ်သိမ်းပေးနေကြောင်း နားလည်သဘော ပေါက်သွားလျှင် မြန်မာအစိုးရသည် အပြုသဘောဆောင်သော တုန့်ပြန်ဆက်ဆံမှုများ ပြုလုပ်လာလိမ့်မည်ဟု Advocacy Group ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဂျရမီး ဝူဒရမ်က ပြောကြားလိုက်သည်။
လက်နက်ကုန်သွယ်မှု တားမြစ်ချက်သည် တပ်မတော်အစိုးရအား အညှာကို ကိုင်ရန် ရည်ရွယ်သော လုပ်ဆောင်မှုသာ ဖြစ်ပေသည်။ အကယ်၍ နိုင်ငံများသည် ၎င်းတို့၏ ပြည်သူများကို ထိခိုက်စေမည့် လက်နက်များကို တပ်ဆင်မပေးရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါက စစ်သားများအတွက် မည်သို့ ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းအချက်သည် အလွန်ထိရောက်တန်ဖိုးရှိသော သတင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်သူများကို ထိခိုက်စေလိမ့်မည် မဟုတ်ပါဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ဆီနိတ်တာ ဂျင်မ်ဝက်က ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံအား အထီးကျန်စေရန် ဘေးဖယ်ထားသော အမေရိကန်၏ မူဝါဒသည် လေးစားဂုဏ်ပြုဖွယ်အသွင် ဆောင်နေချိန်တွင် ၎င်း၏အိမ်နီးချင်း တရုတ်ကြီးက စစ်ရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အကူအညီများ စစ်အစိုးရကို ပေးပြီး လက်တံဆန့်လာခဲ့ခြင်းသည် အမေရိကန် အစိုးရ၏ လွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်မှုကို အားနည်းစေခဲ့လေပြီ ဟုလည်း သုံးသပ်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားဥပဒေပြု အမတ်အများစုနှင့် သဘောထားကွဲလွဲခဲ့သူ စာရေးဆရာ၊ မရင်းတပ်သားဟောင်း၊ ဆီနိတ်တာ ဂျင်မ်ဝက်က အကယ်၍ မြန်မာအစိုးရကသာ ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့လျှင် အမေရိကန်ကလည်း အရေးယူမှုများကို ဖြေလျှော့ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
ကြာသပတေးနေ့က ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာ တစ်စောင်တွင် မြန်မာနိုင်ငံထွက် ပတ္တမြား၊ ကျောက်စိမ်းနှင့် အခြား တန်ဖိုးကြီးကျောက်မျက်ရတနာများ တင်သွင်းကုန်သွယ်ခြင်းကို တားမြစ်ထားသည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဥပဒေသည် အသုံးဝင်ထိရောက်မှု မရှိကြောင်းနှင့် အစိုးရကသာ ကြွယ်ဝချမ်းသာလျက်ရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
အမေရိကန်အစိုးရ စာရင်းကိုင်ဌာနမှ စာရင်းစစ်တစ်ဦးက မြန်မာနိုင်ငံသည် ၎င်း၏ ကျောက်မျက်များကို အလွန်ကြီးမားသည့် ပြည်တွင်းဈေးကွက်ရှ်ိသော တရုတ်နိုင်ငံသို့ လွတ်လပ်စွာ တင်ပို့လျက်ရှိသည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အထက်ပါ အစီရင်ခံစာတွင် အမေရိကန်အစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံထွက် ကျောက်မျက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ထိရောက်သော နည်းလမ်းများ ရှာဖွေသုံးသပ်ရန် အားနည်းခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဘီလ်ကလင်တန်သည် အဖွဲ့ဝင် ၅၀၀ ပါဝင်သော နိုင်ငံတကာမှ စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များကို ဦးဆောင်လျက် ဟေတီနိုင်ငံသို့ ကုလသမဂ္ဂ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် သွားရောက်ခဲ့သည်။ ဟေတီနိုင်ငံ၏ တိုးတက်မှုကို ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် သွားခြင်းဖြစ်သည်။
မြို့တော် Part-au-Price ရှိ Inter-American Development Bank (IDB) တွင် ကလင်တန်က “ယခုအချိန်သည် ဟေတီနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ရန် အချိန်ကျပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသော အိမ်နီးချင်း၊ စိတ်ချရသော စီးပွားရေးမိတ်ဆွေဖြစ်ရေး၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးများကို ဆွဲဆောင်ရန်နှင့် အလုပ်ကြိုးစားသော ဟေတီလူမျိုးတို့အတွက် ချမ်းသာကြွယ်ဝသော နိုင်ငံဖြစ်စေလိုကြောင်း” ပြောကြားပါသည်။
သူ၏ ၂ ရက်ကြာ ခရီးစဉ်အတွင်း UNESCO က ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော Sans Souci Palace နှင့် နိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်စခန်းများကို ဦးစားပေးသွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါဒေသမှာ ဆီဒါဒယ်လ်တို့၏ နေရာနှင့် ဟေတီ၏ လွတ်လပ်မှု သမိုင်းအထောက်အထား နေရာလည်း ဖြစ်သည်။
ယမန်နေ့က ဟေတီသမ္မတ Rene Preval နှင့် စစ်ဝန်ကြီးချုပ် Michele Pierre-Louis နှင့် တွေ့ဆုံပြီး ဟေတီနိုင်ငံ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုအစီအစဉ်ကို ထောက်ခံခဲ့ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ ယခုခရီးစဉ်သည် ကလင်တန်အတွက် တတိယအကြိမ်မြောက်ခရီးစဉ် ဖြစ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက ၎င်းအား အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ခန့်အပ်ပြီးနောက် ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ရောက်ရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူ ဒုတိယအထူးကိုယ်စားလှယ် Paul Farmer လည်း အတူလိုက်ပါလာသည်။ Paul Farmer မှာ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်လည်း ဖြစ်သည်။
ဇွန်တွင် စတင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ ကလင်တန်မှာ လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုများစွာ ရှိခဲ့ပါသည်။ Labadie ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းတွင် Royal Caribbean Cruise Line မှ ဒေါ်လာ ၅၅ သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ စခန်းသို့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် တစ်သန်းလာရောက်ရန် မျှော်လင့်ထားပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမှ ဒေသခံ ထုတ်လုပ်သူများထံမှ အစားအစာများဝယ်ယူခြင်းက ဒေသစီးပွားရေးကို တိုးတက်စေမည် ဖြစ်သည်။ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း ဧည့်ကြိုနှင့် ဧည့်ခံခြင်း အတတ်ပညာ သင်ကျောင်းကိုလည်း ဒေသခံများအတွက် ဖွင့်လှစ်သွားရန် ရှိပါသည်။ Clinton Global Initiative (CGI) မှလည်း လုပ်ငန်း နှစ်ဒါဇင်ခန့်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၈ သန်း သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် Matt Damon Organization မှလည်း လူ ၅၀၀၀၀ အတွက် ရေနှင့် မိလ္လာသန့်စင်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ယခုလစောစောပိုင်းက မစ္စတာကလင်တန်က ဤတိုင်းပြည်တွင် ထူးခြားသော အခွင့်အလမ်းများ ရှိကြောင်း၊ မှားယွင်းသော အုပ်ချုပ်မှုနှင့် လျစ်လျူရှုမှုများနှင့် ရုန်းကန်နေရမှုများ ရှိသော်လည်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှ ဟေတီ တိုးတက်မှုအတွက် ဝိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးပေးရန်လိုကြောင်း လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဟေတီလူမျိုးတို့ အမြင်မှာ အပြုသဘောဆောင်ကြောင်း၊ အစိုးရ၏ ခေတ်မီတိုးတက်သော နိုင်ငံတည်ဆောက်ရန် ဆုံးဖြတ်မှုနှင့် နိုင်ငံတကာ၏ ကူညီမှုသာ လိုအပ်ပါကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။
ကလင်တန်က ဟေတီသည် အတိတ်ကို ကျော်လွန်သွားသည်နှင့် ထူးခြားသော အခွင့်အလမ်းများ ရှိနိုင်ကြောင်း၊ ဟေတီသည် အနောက်ဘက်ဒေသအတွင်း အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည်ဟု လေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ကြောင်း ကလင်တန်က ပြောကြားသွားသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘေးဖယ်ထားမည်လော!
Burma Polls 2010 Sans Suu Kyi!
တပ်မတော်အစိုးရက အဆိုပြုထားသော ၂၀၁၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နှင့်အခြားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များကို ပါဝင်ခွင့်မပေးဘဲ ထိန်းသိမ်းထားခဲ့လျှင် အဓိပ္ပါယ်ကောရှိပါသေးရဲ့ လား! ဟု ဆောင်းပါးရှင်က မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပြီး ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူ ပြည်ပရောက်မြန်မာများ သာမက ထင်ရှားသော နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအုပ်စုကြီးများက လက်ရှိအစိုးရသည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဘေးဖယ်ထားပါက နိုင်ငံတွင်း တိုးတက်ကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖော်ဆောင်ရန်အလွန်ခက်ခဲ လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုထားပါသည်။
ကန္ဒီဂျာယမ်တီ နေ့ထူးနေ့မြတ်တွင် များပြားလှစွာသော ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သား အိန္ဒိယလူမျိုးများ နှင့် ပြည်ပရောက် မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့များသည် ထက်မြက်စူးရှသည့် အယူအဆများဖြစ်သည့် “စုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ပါဝင်ခွင့်ရရန် အချိန်မီလွှတ်မပေးပါက လာမည့် ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲသည် အဓိပ္ပါယ်ကင်းမဲ့နေပေလိမ့်မည်။ ၎င်းရွေးကောက်ပွဲသည် လက်ရှိတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များအာဏာကို ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ရန်ခင်းပေးသောလမ်းသာဖြစ်လိမ့်မည်” အစရှိသောအချက်များကို ကိုင်စွဲရန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ ကြသည်။
အောက်တိုဘာ၂ရက်နေ့က နယူးဒေလီတွင် အိန္ဒိယနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၅၀ကျော်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် ဘားမားစင်တာဒေလီက အိန္ဒိယနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ဂရက်ကော်မတီဥက္ကဌ ဆိုနီယာဂန္ဒီထံ အယူခံလွှာတင်သွင်းခဲ့ကြပြီး ၎င်းစာထဲတွင် “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၂၁၀၀ကျော်ကို လွှတ်မပေးပါက မည်သူမဆို ပါဝင်နိုင်သော နိုင်ငံရေးဖြစ်တည်မှုလမ်းစဉ်တစ်ခု ပိုလာမည်မဟုတ်သလို လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲလည်း မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်မှုများလည်း ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။
၎င်းစာတွင် ဆက်လက်၍ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များကို ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီအောင် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ပြုရေးတို့ကို ဖော်ဆောင်မည်မဟုတ်ဘဲ တပ်မတော်အစိုးရအာဏာ ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်ရေးကိုသာ ဖော်ဆောင်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။
အဆိုပါဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းများက မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီဆိုင်ရာ စံနှုန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ပြန်လွှတ်ပေးရေး စသောအချက်များ ထောက်ခံတောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ယနေ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ(၂)ရက်သည် နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးနေ့ ဖြစ်ပြီး မဟတ္တမဂန္ဒီကြီး၏ အကြိမ်၁၄၀မြောက် မွေးနေ့ဖြစ်ပါသဖြင့် မင်္ဂလာရှိသော နေ့ထူးနေ့မြတ်လည်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ သင်၏သနားကြင်နာသော အလေးဂရုထားမှုနှင့်အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အမှတ်ရစေခြင်းအလို့ငှာ ယခုကောင်းချီးမင်္ဂလာများကို ကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ကြည်းခဲ့ပါကြောင်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရသော ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆု အပါအ၀င် အခြားသောနိုင်ငံတကာမှ ဆုများအကြောင်းကို ၎င်းစာထဲတွင် ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကာလကတည်းကပင် တရားမျှတရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအစိုးရပေါ်ထွန်းရေးစသည့် အချက်များကို ငြိမ်းချမ်းစွာ တောင်းဆိုခဲ့သော မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူများသည် ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်အသက်ဆုံးရှုံးခြင်း များကို ခံစားခဲ့ကြရသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၁၀၀ကျော်ကို ဖမ်းဆီးထားပြီး ၎င်းတို့အနက် အများစုမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရပြီး အချို့မှာ ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲ ထောင်ဒဏ်၁၀၆နှစ်ခန့် ချမှတ်ခံရသူများဖြစ်သည်။
“မိမိတို့သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြောင်း၊သူမနှင့် သူမ၏ NLD ပါတီတို့သည် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြတ်အသတ်အနိုင် ရရှိခဲ့သော်လည်း တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ခွင့်မရခဲ့ကြောင်း၊ တပ်မတော်အစိုးရသည် ပြည်သူလူထု၏ ရပိုင်ခွင့် များကို ကြိတ်ခြေပစ်ခဲ့ပြီး သူမအား ၁၄နှစ်နေအိမ်တွင် အကျယ်ချုပ်ချထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြထားသည်။
၁၉၈၈ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ပွားခဲ့စဉ်ကပင်ထိုစဉ်က အိန္ဒိယ ၀န်ကြီးချုပ် ရာဂျစ်ဂန္ဒီက ထောက်ခံအားပေးခဲ့ပြီး ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူများကိုလည်း လက်ခံ ကာကွယ်ခဲ့ ကြောင်းနှင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အိန္ဒိယသံရုံးကပင်လျှင် ဒီမိုကရေစီဝါဒီများ အိန္ဒိယသို့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်ရန် ငွေကြေးကူညီပံ့ပိုးခဲ့ကြောင်း နယူးဒေလီအခြေစိုက်ပြည်ပရောက် မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့သား တစ်ဦးက သတိတရပြန်လည်ပြောပြခဲ့သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ အယူခံစာလွှာကို နိုင်ငံတကာ NGO နှင့် Advocacy အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၅၈ဖွဲ့က ထောက်ခံလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်ထွန်းကားရေးစသော ကိစ္စရပ်များတွင် ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် နယူးဒေလီကို တိုက်တွန်းထားသည်။
ယခုနောက်ဆုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ချမှတ်ထားသော တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားမျှတမှုပျောက်ဆုံးနေခြင်းကို ညွှန်ပြရုံသာမကဘဲ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် သူမပါဝင်နိုင် ခြင်းမရှိစေရန် တားမြစ်ထားသော တပ်မတော်အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းမှုပင်ဖြစ်ကြောင်း နယူးဒေလီအခြေစိုက် ဘားမားစင်တာဒေလီမှ ဒေါက်တာ အလာနာဂိုလ်မီးက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
သူမကဆက်လက်၍ ယခုကိစ္စသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး ဖြစ်တည်မှုလမ်းစဉ် တွင် တားဆီးပိတ်ဆို့မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ၏ သဘောထားကို လျစ်လျူရှုကာ ဒီမိုကရေစီဝါဒကို ဖိနှိပ်သော ၎င်းတို့၏ စိတ်ရင်းကိုပြသခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတွင်းစစ်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးကို အမြစ်တွယ်စေမည့် အတုအယောင် အခြေခံဥပဒေနှင့် အယောင်ဆောင်ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံခြင်းမပြုရန် အိန္ဒိယအစိုးရအား အလေးအနက်တိုက်တွန်းအပ်ပါကြောင်း စသဖြင့် ပြောကြားကာ သူမ၏ စကားကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။
စစ်အစိုးရ၏ မဟာမိတ်နိုင်ငံများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆို
ဂျီနီဗာ - တရုတ်အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံစစ်အစ်ိုးရ၏ မဟာမိတ်နိုင်ငံများ အတူတကွပူးပေါင်း၍ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ချခံထားရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
အိန္ဒိယနှင့် ရုရှားတို့ကလည်း ဥရောပနိုင်ငံများ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့နှင့်အတူ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအားလုံးလွှတ်ပေးပြီး လာမည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါဝင်စေရေး တောင်းဆိုရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် ၄၇ ဦးကလည်း ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့က စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အယူခံဝင်မှုကို ပယ်ချခဲ့မှုအပေါ် ဂျီနီဗာတွင် တညီတညွတ် တည်း ဆုံးဖြတ် ချက်တစ်ခု ချမှတ်ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုပါသည်။
Beijing သည် သူ၏ တောင်ဘက် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအပေါ် နိုင်ငံတကာ၏ ဝေဖန်မှုများအပေါ် အမြဲတစေ ကာကွယ်ပေးလေ့ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်အပြီးတွင် တရုတ် နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြောဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Jiang Yu Jiang က နိုင်ငံတကာ လူ့အဖွဲ့အစည်း အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားစီရင်ရေး ဆိုင်ရာ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ခွင့်ကို လေးစားသင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ရဲချုပ်ခင်ရီ အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိ အရေးယူခံထားရဖွယ်ရှိ
ရဲချုပ်ခင်ရီသည် ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံရခြင်းထက် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအရေး ယူခံထားရခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း စစ်အစိုးရအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်နီးစပ်သူတစ်ဦးက သုံးသပ်ပြော ဆိုသည်။
နေပြည်တော်တွင် အောက်တိုဘာ ၃ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ ၄၅ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်ပွဲတွင် ရဲချုပ်ခင်ရီတက်ရောက်ခြင်းမရှိသည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်း အမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်နေမှုအပေါ်တွင် ယင်းသို့သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းပွဲသို့ ရဲချုပ်ခင်ရီတက်ရောက်ခြင်းမရှိခဲ့သော်လည်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးမောင်ဦး နှင့် အခြားဒုရဲချုပ်၊ရဲဦးစီးချုပ်များတက်ရောက်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူကိုသစ္စာရှိကြရန်၊သူတစ်ပါးကို အရေးယူနိုင်ရန်အတွက် ဖမ်းဆီး စစ်ဆေး တရားစွဲရသော ဌာနဖြစ်၍ မိမိကိုယ်တိုင်ပုံရိပ်မှန်မှ တပ်ဖွဲ့၏ဂုဏ်တက်မှာဖြစ် ကြောင်းဝန်ကြီး ဦးမောင်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ပြည်သူပိုင်သတင်းများမှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာ ချက်အရသိရသည်။
ရဲချုပ်ခင်ရီသည် စက်တင်ဘာလလယ်က လာဘ်စားမှုနှင့် စွပ်စွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် ရန်ကုန်တိုင်း ရဲမှူးကြီးဝင်းနိုင် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မသင်္ကာမှုဖြင့် ထိမ်း သိမ်းခံထားရကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့များကို ရဲချုပ်ခင်ရီက လိုက်လံစစ်ဆေးခဲ့ ကြောင်းအောက်တိုဘာ ၁ရက်ထုတ်ပြည်သူပိုင်သတင်းစာများတွင် ဓါတ်ပုံနှင့်တကွ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။
သို့သော် နေပြည်တော်တွင်ပြုလုပ်သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့နှစ်ပတ်လည်ပွဲတွင် တက်ရောက် ခဲ့ခြင်းမရှိသည့်အပေါ် ရာထူးမှဖယ်ရှားခံရသည်ဟု တရားဝင်မဟုတ်သောသတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ “ မသေချာဘဲ ကောလာဟာလက ထွက်လေ့မရှိဘူး၊ဒါပေမယ့် အခြေအနေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ရာထူးကဖယ်ရှားခံရတာထက် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ အရေးယူခံထားရနိုင်တယ်” ဟု အာဏာရှင်အစိုးရနှင့်နီးစပ်သူ တစ်ဦးကပြော သည်။
ရဲချုပ်ခင်ရီသည် မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် စတင် ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သည်။
မြန်မာ့အရေးအဖြေရှာမှုတွင် ထိုင်းနိုင်ငံက ပူးပေါင်းပါဝင်မည်
(Editorial, Bangkokpost) Oct 4, 2009
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Kasit Pirmya က နယူးယောက်မှ မှတ်ချက်ပြုရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လွှတ်ပေးရန် အာစီယံအနေဖြင့် မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်းမည့်အစီအစဉ်အား ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့သည် ၎င်းတို့၏ မူဝါဒကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပိုမို၍ဆက်ဆံသွားရန်သဘောတူလိုက်ကြသောကြောင့် အာစီယံ အနေဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုပြုလုပ်ရန် အဆိုပါအစီအစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
Mr.Kasit သည်ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က နယူးယောက်တွင် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ တက်ရောက်လျက်ရှိစဉ် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ၀န်ကြီးများကို ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံအသီးသီးရှိ အတိုက်အခံများအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လွှတ်ပေးရန် မြန်မာအစိုးရထံ စာရေးတောင်းဆိုပေးရေးကို တိုက်တွန်းခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
လက်ရှိထိုင်းအစိုးရသည် ယခင်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပိုမို၍တွန်းအားပေး၍ ဆက်ဆံသော မူဝါဒကိုကျင့်သုံးခဲ့ရာ ယခု ကုလသမဂ္ဂတို့က မြန်မာအစိုးရနှင့်အဆက်အဆံပြုလုပ်ရေးကို ပြောလာကြသဖြင့် မိမိတို့ အနေဖြင့် မိမိတို့၏မူဝါဒကိုလည်း စွန့်လွှတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း Mr.Kasit က ပြောကြားပါသည်။
ယခုလူသားချင်းကိုယ်ချင်းစာနာထောက်ထားမှု ခေါင်းစဉ်ကို ခဏမေ့ထား၍ အခြားပြောစရာများ ရှိနေပါသေးသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ၏ ကြီးမားသောအကျိုး သက်ရောက်မှု ရိုက်ခတ်ခံရလျက်ရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး အပါအ၀င် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ NLD ပါတီ၊ လက်ရှိအစိုးရနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်နေသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် ပြောဆိုတိုက်တွန်းကြိုးပမ်းခွင့် ရှိပြီး တာဝန်လည်းရှိသည်ဟု ယူဆ ပါသည်။
ယခုထိုင်းဒုက္ခသည်စခန်းတွင် မြန်မာဒုက္ခသည် တစ်သိန်းခွဲထက်မနည်းရှိနေပြီး၊ မရေတွက်ရသေးသော လက်ရှိစစ်အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးအရသော်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးအရသော်လည်းကောင်း ပြဿနာများကြောင့် ထွက်ပြေးလာသူများလည်း ရှိပါသည်။